Volvo ရဲ့ EV အမျိုးအစား Polestar2က Tesla Model3ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာမှာလား? – AutoMyanmar
Volvo ရဲ့ EV အမျိုးအစား Polestar2က Tesla Model3ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာမှာလား?
Volvo ရဲ့ electrified performance ကားတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့ standalone brand Polestar ဟာတော့ Polestar2မော်ဒယ် electric vehicle ကိုလာမယ့် ၂၀၁၉ မှာကျင်းပသွားမယ့် Geneva Motor Show မှာ ချပြသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဒီအပတ်မှာကျင်းပသွားတဲ့ Autoshow တစ်ခုမှာ ပြောကြားသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ မကြာခင်ချပြသွားမယ့် Polestar2ဟာတော့ ကနဉီးထွက်ရှိခဲ့တဲ့ 592bhp Polestar 1 ရဲ့နောက်လိုက် Saloon ပုံသဏ္ဏာန်တွေ့ရမယ့် ကားမော်ဒယ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းက Volvo ဟာ Next generation ကားတွေမှာ Google service ထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခဲ့ဖူးတာတော်တော်များများသိလောက်မှာပါ။ သူတို့ကြေညာခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ Volvo ဟာ Google Assistant, Google Maps နဲ့တခြားသော Google Service တွေပါဝင်တဲ့ Android operating system ကြီးကို Polestar2ရဲ့ infotainment system ကိုကြီးပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ (အခုလို infotainment system ကောင်းမွန်မှုအတွက် Google နဲ့ပူးပေါင်းမှုပြုလုပ်ထားတာ Volvo တင်မဟုတ်ပဲ Renault, Nissan, Mitsubishi တို့ကလည်းပူးပေါင်းမှုပြုလုပ်ထားသေးတာဖြစ်ပါတယ်။)
အခုလိုပူးပေါင်းမှုကို Google ရဲ့ ဒါရိုက်တာ Mickey Kataria က
“Google Maps, Google Assistant အစရှိတာတွေကို တော်တော်များများက Android ဖုန်း (သို့) iPhone တွေ (သို့) နာရီတွေမှာတော်တော်များများကထည့်သွင်းအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အဲ့လို digital life ကြီးမှာ ပိုပြီးရှေ့ဆက်နိုင်အောင် ကားတွေမှာပါထည့်သွင်းဖို့ပြုလုပ်လာရတာပါ။”
Mid size Polestar2ကိုစတင်ထုတ်လုပ်မယ့်အချိန်ကတော့ ၂၀၂၀ မှာဖြစ်မယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲ့လိုထွက်ရှိလာမယ့်အချိန်ကျရင် Polestar2ဟာ Tesla Model3ကိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်မယ့် EV မော်ဒယ်တစ်ခုဖြစ်မှာကြောင့် အရွယ်အစားနဲ့ စျေးနှုန်းကိုတော့ အားလုံးသိပြီးကြမယ်ထင်ပါတယ်လို့ Polestar ရဲ့ CEO ကရှေ့ပြေးပြောကြားထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။
Polestar CEO ပြောကြားထားတဲ့ ရှေ့ပြေးစကားအတိုင်း Polestar2ကတကယ်ကို Tesla Model3နဲ့ယှဉ်နိုင်တဲ့ ပြိုင်ဘက် EV တစ်ခုဖြစ်လာမှာလားဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။